Nyochaa ụlọ ọrụ Energy Sistem Home Ọkà Okwu 7 | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa ụlọ ọrụ Energy Sistem Home Speaker 7
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Foto na ụda, Nyocha
Taa, anyị ewetara gị nyocha pụrụ iche, na ọzọ n'aka ndị enyi Energy Sistem. N'ime nnukwu katalọgụ nke ngwaahịa metụtara ụda na egwu, oge a ka anyị ahọrọla nke dọtara mmasị anyị karịsịa, Ọkà okwu ụlọ 7.
Ichere na oge eruola ka CD gị ga-abịa? Ọ dịghị ihe dị anya site na eziokwu. Dị ka anyị si mara, ụzọ nke na-ege ntị music ghọrọ usoro a otutu n'ime afọ ole na ole gara aga. Na mgbakwunye na nke anyị na-ahọrọ ugbu a egwu sitere na Ngwa egwu yana ndepụta gụgharia. Ọbụna usoro anụ ahụ n'onwe ya enweghị ihe ọ bụla gbasara ya. Iji mezuo ọchịchọ na-eto eto, Energy Sistem na-enye anyị ngwaahịa a.
1 Energy Sistem Home Ọkà okwu 7, ohere ọzọ maka CD gị
2 Nke a bụ Energy Sistem Home Speaker 7
2.1 Central unit
2.2 Ndi kwuru okwu
3 Ulo olu ulo 7, otutu ihe maka egwu gi nile
4 Nkọwapụta Nka na ụzụ
5 Uru na Cons Energy Sistem Home Ọkà Okwu 7
5.5 Uche ederede
Energy Sistem Home Ọkà okwu 7, ohere ọzọ maka CD gị
Igwe okwu ulo okwu 7 sitere na Energy Sistem, nwere njikọ bluetooth nwere ọkaibe ọgbọ. Njikọ nke na-enye ohere ịnwe ụda anụ ma dị mma na-ejikọ ngwaọrụ ọ bụla. Mana ọzọkwa, na nke a bụ akụkọ, na stereo a, anyị nwere ike ịge ntị na CD anyị kachasị amasị anyị. Ichere na CD gị bịara na njedebe? Ọbụbeghị! Zụta ụlọ Sistem Ike gị Audio 7 ugbu a na Amazon.
Energy Sistem, site na dOnye na-ekwuchitere 7lọ n'ụlọ XNUMX, napụtara usoro CD nkịtị site na shelf anyị. Na ngwaahịa nke na-agwakọta nkasi obi nke kpọọ egwu site na ngwaọrụ ọ bụla. Y na mgbakwunye n'ụdị ihe ọkpụkpọ CD nke ahụ na-enye mgbakwunye dị mkpa maka ndị na-achọ usoro anụ ahụ.
Ọ bụrụ n’iche maka ya, afọ ole ka ị zụtara stereo maka ụlọ gị? Ugbu a ụzọ anyị si ege egwu anaghị enwe ihe jikọrọ ya na nke afọ iri gara aga. Ma onye na-adịghị na ikpo nke mwute CD n'ụlọ? Ugbu a, na mgbakwunye na ịnwe ike ịnụ ụtọ egwu egwu na-egwu site na ikpo okwu ọ bụla. Na nke ike jikọọ anyị ama ma ọ bụ mbadamba anyị kacha rụọ ọrụ nke ọma. Anyị nwekwara ike inye ndụ na CD ndị ahụ na anyị zụtara azụ n'ụbọchị.
Nke a bụ Energy Sistem Home Speaker 7
Ahụ, a gadget maka egwu dị anya site na ndị na-ekwu okwu na ngwa ngwa na anyị nwere ike inweta ụlọ ọrụ ọ bụla. N'ezie anyị nọ n’ihu nke ngwa egwu zuru oke. Site n'ike mmụọ nsọ nke ndị otu egwu ahụ nwere nnukwu ọganiihu, e mere baptism n'oge ha dị ka "obere igwe". Usoro nke kpochapuru ihe ojoo nke otutu ndi otu.
Na Energy Sistem Home Ọkà okwu 7 bụ a set nke 3 ihe. na "etiti" ma ọ bụ akụkụ bụ isi ebe anyi huru njikwa aka, uzo mmiri na uzo mmirima ihe ọkpụkpọ CD. Na mmadụ abụọ nọọrọ onwe ha na anyị nwere ike idowe ọnụ ma ọ bụ iche iche. Ma gi onwe gina-eburu n'uche na njikọ nke ndị ọkà okwu na akụkụ bụ isi bụ site na eriri. Ya mere, njem ha nwere oke. Ihe na-adịghị mma?
Na n'ihu, na a mara mma imewe na-akpachapụ anya, anyị hụrụ njedebe abụọ dị iche iche. Kewara ekewa, anyị na-ahụ etu akụkụ nke ala gwụchara site na ihe ọla. N'ime ya anyị hụrụ a Bọtịnụ anụ ahụ iji mepe tray DC na menu na njikwa njikwa. Na mgbakwunye, n'akụkụ ya anyị nwere a Ọdụ USB, na onye ọzọ ntinye analog maka eriri mm mm mini 3,5 mm.
N'elu si n'ihu, Emechara ke kenkowaputa nwa plastic anyị hụrụ ihuenyo. N'okpuru ihuenyo bụ ihe ọkpụkpọ CD player. Anyị na-achọta on / gbanyụọ bọtịnụ Nke ngwaọrụ. Na wheel maka njikwa olu, nke anyị nwekwara ike iji na-agagharị na menu ma ọ bụ na-akụ n'ime ọdụ. N'azụ anyị nwere ụdọ ike, ntinye abuo iji jikọọ ndị na-ekwu okwu.
Ndi kwuru okwu
Ọ bụrụ na anyị na-ele ndị na-ekwu okwu anyị ga-ahụ otu iwu ya bu isi. Na ahụ osisi na nwa grille mere nke akwa ihe na purest ochie ịke. Ọdịdị ya dị mma n'ezie maka ịdị mfe ya. Na ekele a ubé garish imewe na kpochapụwo ga-adaba n'ụzọ zuru oke n'akụkụ ọ bụla nke ulo obula.
Ogo nke ndị na-ekwu okwu na-eme ka ha dị mfe "nestable" na shelf ọ bụla. Na a elu 220mm na obosara 180mm, akụkụ ha agaghị abụ nsogbu iji debe ha ebe anyị chọrọ. N’ezie, anyi aghaghi ichefu nke ahu Onye ọ bụla na-ekwu okwu nwere eriri anyị ga-ejikọ na nke etiti. Njikọ eriri ahụ dị mfe nke ukwuu na njedebe "pịa" nke anyị nwere ike itinye ma wepu na nkeji.
Zụta Home Sistem Home Audio gị ugbu a na Amazon na mbufe n'efu
Ulo olu ulo 7, otutu ihe maka egwu gi nile
Inwe ngwaọrụ iji kpọọ egwu, na mgbakwunye na ekweisi, dị mkpa n'ụlọ ọ bụla. Mgbe anyị chọrọ ịzụta ọkà okwu, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ ihe. Design, ike, obodo kwụụrụ, na N'ezie, price. Onye na-ekwu okwu n’ulo 7 a bit nke a ogige na-demarcated n'ihi na dị na mpaghara ọzọ nke ahịa. Maka ugbu a, na nke a Nke a abụghị obere okwu.
Ngwaọrụ a anyị hụrụ ihe eji eme stereo ochie, ma na ukwuu playability. Na a size na imewe na ha na-amasị ha site na mmalite. Na nke kachasị, yana ọnụahịa na-eme ka ọ dị mma na nhọrọ dị oke egwu iji jupụta n'ụlọ anyị na egwu kachasị amasị anyị.
Otu n'ime ngwa ndị dị iche na ngwaọrụ ndị ọzọ dị na ya bụ ya njikwa anya. Obere igwe na-eme ọ dịghị mkpa ka anyị na ndị otu egwuregwu na-emekọrịta ihe oge ọ bụla. Na mgbakwunye na inwe ike ịchịkwa blu Bluetooth music playback si smartphone, na ime anyị nwekwara ike ịchịkwa ndị fọdụrụ nke utilities ọ na-enye. Lee ị nwere ike ịzụta ụlọ Sistem Energy Audio Audio 7 na Amazon na a-akpali nnọọ mmasị price.
Anyị nwere ike ịkpọ egwu, dị ka anyị kwurula nwere CD. Na mgbakwunye, ihe ọkpụkpọ ahụ na-akpọkwa CD ndị edekọ na Ọkpụkpọ MP3. Site na nke Ọdụ USB na anyị na-ahụ na ya n'ihu anyị nwere ike ịkpọ music si a pendrive ma ọ bụ mpụga ebe nchekwa. Yana ntinye USB, anyi na achota Ihe ntinye analog 3,5mm ebe anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ mpụga ọ bụla.
N'ezie anyi nwere Bluetooth njikọ, klas 2 na 2.4 GHz na-arụ ọrụ ugboro ya na a site na mita iri na ise pụọ. Ndakọrịta ya na profaịlụ niile na-enye njikọ na ụda kwụsiri ike na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkwụsị.
Mee ka ọ pụta ìhè na Energy Sistem Home Ọkà okwu 7 bụ eji redio FM. Ihe mmezi echefuru ọtụtụ ndị nrụpụta. Na nke ahụ, karịsịa na ngwaọrụ edozi dị ka nke a, nwere ekele dị ukwuu. Ọ nwere Ogologo oge FM: 87,5 ~ 108MHz. Anyị nwere ruo 50 akpaka search presets. Anyị nwekwara ike ịhazi nyocha anyị na aka.
Nkọwapụta Nka na ụzụ
Nlereanya Ọkà okwu ụlọ 7
Potencia 30 Watts - 2 x 15W 4 "Ndị na - ekwu Okwu zuru ezu -
Onye ọkpụkpọ CD CD-R CD-RW MP3 dakọtara
Bluetooth Klas 2 na ugboro 2.4 GHz
Bịa ruo mita iri
Ntinye analog Ogwe 3.5mm
Radio FM EE nwere ihe ndebe 50
Ime akara SI
Igwe okwu akụkụ X x 180 220 120 mm
Central unit akụkụ X x 154 127 253 mm
Ahịa 99.90 euro
Linkzụta njikọ Ike ụlọ Home Audio 7
Uru na Cons Energy Sistem Home Ọkà Okwu 7
Jiri nlezianya mee ihe na ọdịdị mara mma ma dị mfe nke dabara n'ụlọ ọ bụla.
Egosipụta ọtụtụ nhọrọ iji nwee ike ịnụ egwu na ụzọ dị iche iche.
Inwe redio FM bu isi okwu ozo.
Ime akara ruru eru ịchịkwa niile nhọrọ.
Uche mara mma ma mara mma
All formats n'otu ngwaọrụ
Ọ bụghị ngwaọrụ mkpanaka.
Ndị na-ekwu okwu na-ejikọ ya na isi ya site na eriri, nke na-egbochi ikegharị ha.
Ọ chọrọ plọg na enweghị batrị ya.
Enweghi ike ibughari
USB jikọọ ndị na-ekwu okwu
Enweghị batrị dị n'ime
Energy Sistem Home Ọkà Okwu 7
Nyochaa: Rafa Rodríguez Ballesteros
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa ụlọ ọrụ Energy Sistem Home Speaker 7
Dollar ka mma ka ọ bụ cryptocurrencies?
AUKEY gosipụtara chaja chaja ise mara mma maka ekwentị mkpanaaka na laptọọpụ